वानाहाओ डुप्लिकेटर 3D थ्रीडी प्रिन्टर समीक्षा | नि: शुल्क हार्डवेयर
वानाहाओ डुप्लिकेटर 3D थ्रीडी प्रिन्टर समीक्षा
हामी प्रिन्टरको विश्लेषण गर्दछौं थ्रीडी वानाहाओ डुप्लिकेटर।, संयुक्त राष्ट्र उपकरण छाप को SLA फोटोसेन्सिटिव राल प्रयोग गर्दै हाम्रो डिजाइनहरू असाधारण रिजोलुसनको साथ संश्लेषण गर्न।
वानहाओ एक एशियाई निर्माता यसका कैटलॉगमा भएका उत्पादहरूको विस्तृत श्रृंखला र ती सबैमा उत्कृष्ट गुणस्तर / मूल्य अनुपातको लागि निर्माता समुदायमा परिचित छ। अहिले सम्म कम्पनीले FDM प्रिन्टि onको आधारमा उत्पादनहरू बनाउनेमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको थियो, यस प्रक्षेपणको साथ उनीहरूले आफ्ना बाँकी प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा उल्लेखनीय कम मूल्यको साथ एक प्रिन्टर प्रस्तुत गरेर बजारलाई हल्लाए
स्टेरियोलिथोग्राफी प्रयोग गरेर प्रिन्टिंग FDM प्रिन्टि from भन्दा धेरै फरक तरीका हो जुन हामी सामान्य रूपमा ब्लगमा कुरा गर्छौं, हामी यस टेक्नोलोजीको सब भन्दा साधारण भेरियन्टहरूको बारेमा थोरै व्याख्या गर्न जाँदैछौं जुन हामीले हालको मार्केटिंग भएका थ्रीडी प्रिन्टरहरूमा फेला पार्न सक्छौं।
1 DLP vs SLA बनाम MSLA प्रिन्टि।
1.1 DLP प्रिन्टिंग
1.2 SLA मुद्रण
2 समान उत्पादनहरूको तुलना
3 प्रिन्टर विशिष्टता र प्राविधिक पक्षहरू
4 संस्करण बीच सुधार गर्दै
5 Wanhao डुप्लिकेटर ator थ्रीडी प्रिन्टरको अनबक्स र स्टार्ट अप
6 SLA मुद्रणको विशेष सुविधाहरू
6.1 पोस्ट इम्प्रेशन उपचार
7 पछि बिक्री सेवा र निर्माता समुदायबाट समर्थन
8 जडान, स्वायत्त अपरेशन र समर्थित अपरेटिंग सिस्टमहरू
9 मूल्य र वितरण
11 सम्पादकको विचार
12 प्रो र सहमति
DLP vs SLA बनाम MSLA प्रिन्टि।
एक डिजिटल प्रोजेक्टर एकल तह अनुरूप छवि प्रकाशित गर्न प्रयोग गरीन्छ। एकचोटि संश्लेषित भएपछि, यो तह विस्थापित हुन्छ र निम्न तहहरू एक अर्कासँग मिल्दो एक गरेर संश्लेषित हुन्छन्। किनभने प्रत्येक तह को छवि डिजिटल प्रदर्शित, असंख्य वर्ग पिक्सेल समावेश गर्दछजेड अक्षसँगै स्ट्याक हुने भोक्सल्स भनिने साना आयताकार इँटाले बनेको तहमा परिणाम हुन्छ।
UV लेजर वस्तुको प्रत्येक तह कोर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ र दुई मोटर-चालित दर्पणहरू, जसलाई गेल्भानोमिटरहरू (X अक्षमा र Y अक्षमा एक) को रूपमा चिनिन्छ, चाँडो प्रिन्ट क्षेत्रको बीचमा लेजर स point्केत गर्न प्रयोग गरिन्छ, यसलाई रेजिन सार्दा ठोस बनाउँदै। तह पूरा भएपछि, यो स्क्रोल हुन्छ र वस्तुमा सबै तहहरूका लागि प्रक्रिया दोहोरिन्छ। डिजाइन बिन्दु र रेखाको श्रृ into्खलामा तह द्वारा तह टुक्रिएको हुनुपर्छ. लेजरले ग्याल्भानोमिटरहरू प्रयोग गरेर रेजिनमा यो निर्देशांकहरूको सेट ट्रेस गर्दछ।
एक एलईडी म्याट्रिक्स एक LCD फोटोमास्क संग संयोजन मा यसको प्रकाश स्रोत को रूप मा प्रयोग गरीन्छ क्रमशः LED मैट्रिक्सको प्रकाश छवि आकार गर्न। DLP जस्तै, LCD फोटोमास्क डिजिटली रूपमा प्रदर्शित र वर्ग पिक्सेलले बनाएको छ। पिक्सेलको आकार LCD फोटोमास्क कसरी निर्मितमा निर्भर गर्दछ र व्यक्तिगत पिक्सेलहरू LCD स्क्रिनमा बन्द हुन्छ यसको परिणाम स्वरूप तह बन्न एलईडी प्रकाश लाई पार गर्न अनुमति दिन्छ। LCD फोटोमास्कको पिक्सेल आकार एलईडी एर्रे कसरी निर्मित हुन्छ मा आधारित छ।
यो महसुस गर्न सकिन्छ प्रतिबन्धात्मक मूल्य SLA प्रिन्टरको अन्त नजिक छएशियाई शपिंग पृष्ठहरूमा एलीएक्सप्रेस जस्तो हामी उचित मूल्यका साथ बिभिन्न SLA प्रिन्टरहरू फेला पार्न सक्छौं। यस तुलनाका लागि हामीले विश्लेषण गरिएको मोडेल, क्षेत्रका प्रमुख निर्माताहरूबाट दुईवटा विकल्पहरू र किकस्टार्टर अभियान छनौट गरेका छौं जसमा हामी धेरै सफलताको चाहना गर्छौं किनकि हामी आशा गर्छौं कि यसले आगामी महिनाहरूमा बाँकी निर्माताहरूका लागि लाइन सेट गर्नेछ।
प्रिन्टर विशिष्टता र प्राविधिक पक्षहरू
Wanhao डुप्लिकेटर D DLP थ्रीडी प्रिन्टर एक यस्तो उपकरण हो जुन धेरै समाहित आयामहरू छन् जुन हामी हाम्रो घर वा अफिसमा कहिँ राख्न सक्दछौं। नेलहरू अन आयाम मुश्किलले 200x200x430 मिमी हामीसँग बिना संकुचित र अग्लो टोली छ पेसो अत्यधिक, १२ किलोग्राम.
प्रिन्टरसँग एक छ 120x70x200mm मुद्रण मात्रा र एक Mic 35 माइक्रोन तह रिजोलुसन। यी सुविधाहरूको साथ यी टोलीहरू शक्तिमा केन्द्रित हुन्छन् अत्यधिक जटिल डिजाइनहरू र अन्तहीन विवरणहरूको साथ सटीक वस्तुहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्। गहना, दंत चिकित्सक, युद्ध खेल प्रशंसक, डिजाइनर र थ्रीडी कलाकारहरूले यस टोलीमा एक अविभाज्य साथी फेला पार्नेछन्।
एक संग गति mm०mm / h (प्यारामिटर जुन प्रयोग रालका उपचार सुविधाहरूमा निर्भर गर्दछ) Wanhao टोली तुलनामा सबै भन्दा छिटो टोलीको रूपमा बाहिर खडा छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, २० सेन्टीमिटरको वस्तु प्रिन्ट गर्न १० घण्टा लाग्न सक्दछ।
प्रिन्टरले तरंगदैर्ध्य 395 405-XNUMX०XNUMX एनएम र यो मार्केटमा उपलब्ध धेरै रेजिनसँग उपयुक्त छ। केवल प्यारामिटरहरू समायोजन गर्न एक सामग्रीबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुन।
प्रिन्टरसँग एकदम ठोस निर्माण छ, सबै अपारदर्शी कालो धातुले बनेको छ।
विद्युत आपूर्ति बाह्य तत्व हो।
हामी तत्वहरूलाई छुट्याउन सक्छौं जुन यसलाई निम्न रूपमा रचना गर्दछ:
कभर: यो हटाउन सकिने तत्त्व हो जुन हाम्रो प्रिन्टरलाई ढाक्नको लागि जिम्मेदार छ ताकि यो सञ्चालन भइरहेको बेलामा यसले यूभी प्रकाशको जोखिमले हाम्रो आँखालाई रोक्न सक्दैन। पनि हाम्रो राल ट्रेलाई बाह्य यूवी स्रोतहरूबाट सुरक्षित गर्दछ यसले हाम्रो प्रभाव बिगार्न सक्छ। यो पूर्ण रूपमा धातुले बनेको तत्व हो, ठोस तर गह्रौं। यसलाई ह्यान्डलहरूसँग छैन यसलाई अधिक सजिलैसँग हेरफेर गर्न सक्षम हुन र यो पारदर्शी हुनको लागि यो योग्य हुनेछ ताकि प्रभाव बनाइएको बेलामा रेजिन ट्रे देख्न सकिन्छ।
तल्लो शरीर: यसले बाँकी तत्वहरू समाहित गर्दछ र हाम्रो प्रिन्टरको मुख्य अंश हो। मोर्चामा हामी निर्माताको लोगो र पावर बटन फेला पार्दछौं। यो भित्र काम गर्न सबै इलेक्ट्रोनिक्स राखिएको छ। हामीले जाँच गरेका छौं डिजाइन airflows को मामला मा अक्षम छ इलेक्ट्रोनिक्स चिसो गर्न। यस विवरणले प्रिन्टहरूमा उपकरणहरूसँग समस्या पैदा गर्न सक्छ जुन धेरै घण्टाको आवश्यकता पर्दछ।
Z अक्ष हात: को आरोप मा तत्व छ प्लेट शिफ्ट निर्माण गर्नुहोस् यसलाई सतहबाट टाढा सार्नको लागि जब लेयरहरू सिर्जना हुन्छन्। यो एक बाट हुन्छ प्रेसिजन थ्रेडेड रड जसमा स्टिपर मोटरको आन्दोलन प्रसारित हुन्छ। रड र मोटर बीचको युग्मन धेरै कठोर छ र कहिलेकाँही मुद्रण त्रुटि पनि परिणामको रूपमा देख्न सकिन्छ।
प्रिन्ट बेस: हटाउन योग्य प्लेटफर्म जुन हाम्रो प्रिन्टहरूको अनुसरण गर्दछ र Z अक्षमा सारिन्छ
Z अक्ष रोक्नुहोस्: अप्टिकल सेन्सर प्रिन्ट बेड रोक्नको लागि जिम्मेदार छ जब तपाईं LCD स्क्रिनमा हुनुहुन्छ
Wanhao डुप्लिकेटर7एक संग सुसज्जित छ HD LCD स्क्रीन २2560० x १1440० पिक्सेलको रिजोलुसन प्रस्तुत गर्दै। यसको माथि पारदर्शी तलको ट्रे राखिएको हुन्छ, UV प्रकाशलाई LCD स्क्रिनबाट रेजिन कडा बनाउन अनुमति दिन्छ। ट्रेको तल (सामान्यतया फ्लेक्सब्याट भनेर चिनिन्छ किनकि यो एक लचिलो र पारदर्शी पाना हो) रालको क्युरिंगमा रासायनिक प्रतिक्रियाको कारण लगाइएको पीडित तत्त्व हो, यो बिग्रेको छ जब यो धेरै बिग्रन्छ।
संस्करण बीच सुधार गर्दै
वानाहाओ डुप्लिकेटर 3D थ्रीडी प्रिन्टर हो निरन्तर विकसित टीम। निर्माताले आफ्ना ग्राहकहरूको टिप्पणीहरूमा ध्यान दिएका छ र तिनीहरूलाई रिपोर्ट गरिएका सबै समस्याहरू सुधार्न धेरै परिवर्तनहरू गरिसकेका छन। विशिष्ट भर्खरको उपलब्ध संस्करणमा हामीले पहिले उल्लेख गरेका सबै कमजोरीहरू सुधार गरिएको छ। यो दृष्टिकोणले Wanhao लाई थप मूल्य दिन्छ जुन हामीले वास्तवमै मनपराउँदछौं।
हामी तपाईंलाई एउटा सानो सारांश दिन्छौं संस्करण १.1.4 फिक्सहरू प्रिन्टर:
UV LED को माउन्टिंग र जडान विद्युत समस्याबाट बच्न सुधार गरिएको छ
पावर बटन प्रिन्टरको पछाडि सारियो।
अधिक सटीक चालको लागि Z रडमा ब्रास नट। क्ल्याम्पि system प्रणाली सुधार गरिएको छ रडलाई सुरक्षित गर्न र यसलाई अझ राम्रोसँग केन्द्रित गर्न।
युवी कूलि fan फ्यान (mm० मिमी) र heatsink आकार राम्रो कूलि forको लागि बढ्यो। राम्रो हावा प्रवाहको लागि प्रिन्टरको पछाडि थप उद्घाटनहरू थपिएको छ। मदरबोर्ड सुन्दर छ र केस हावामा पारिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न एक mm० मिमी साइड माध्यमिक फ्यान थपियो।
नयाँ मोल्ड गरिएको परावर्तकको राम्रो प्रतिबिम्ब हुन्छ।
नयाँ आन्तरिक 70W विद्युत आपूर्ति।
बिल्ड प्लेटफर्म अब + ०.०0,03 मिलिमिटरको सहिष्णुताको लागि तयार गरिएको छ।
Wanhao डुप्लिकेटर ator थ्रीडी प्रिन्टरको अनबक्स र स्टार्ट अप
प्रिन्टरले हाम्रो हातहरूमा पुग्नको लागि यात्रा गरेको किलोमिटरको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै ( उपकरण चीन बाट पठाइएको छ), स्वीकार्य अवस्था भन्दा बढि आएको छ। प्याकेजि toलाई कुनै स्पष्ट क्षति छैन। तलको भिडियोमा तपाई विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
जहाँसम्म, उपकरणहरू खोल्ने प्रयास गर्दा हामीले पत्ता लगायौं कि पावर बटनले काम गरेनन्, सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको फोरमहरूमा एक नजर पछि हामीले पत्ता लगायौं कि यो केबल को लागी ढुवानीको समयमा लुक्नको लागि सामान्य छ (यसको बावजुद निर्माताले तिनीहरूलाई सिलिकॉन प्रयोग गरेर राख्छ) र यो पनि सिफारिस गरिन्छ कि पहिलो इग्निशन अघि इलेक्ट्रोनिक्सको राज्य र सबै जडानहरू जाँच गरिनु पर्छ। समस्या समाधान भयो, त्यहाँ केही तराजु तारहरू थिए।
प्रिन्टर एकल छैन र पीसी चाहिन्छ वा यस्तै प्रकारको उपकरणहरू यसमा USB र HDMI केबल द्वारा जडित छन्। कागजातमा लिंक बिना कुनै शुल्कको ड्रपबक्सबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न जोडिएको छ। म्यानुअलहरूले विन्डोजमा प्रिन्टि software सफ्टवेयर कन्फिगर गर्ने तरिकाको स्क्रीनशटहरू समावेश गर्दछ। दोस्रो समस्या, म्यानुअलमा ध्यान दिएर हामीले मान्य मान्यता पाएनौं। निर्माताको टेक्निकल सेवाको साथ केही ईमेलहरू पछि, हामीले हाम्रो पहिलो प्रभाव पार्न सही प्यारामिटरहरू पाएका छौं।.
हीटिंगको साथ पढिएका समस्याहरू सामना गर्नु पर्‍यो प्रिन्टर र हाम्रो टीम को पहिलो संस्करण को "प्रभावित" को एक हो, हामीले इलेक्ट्रोनिक्स खुला अवस्थित डिब्बा छोड्ने निर्णय ग .्यौं भेन्टिलेसन सुधार गर्न र समावेश गरिएको छोटो विस्तारको उपयोगको सट्टा सर्किटरीमा सिधा हाम्रो HDMI जडान गर्न। यो कुरा निश्चित समाधानको लागि पर्खिरहेको छ।
हाम्रो मामला मा प्रिन्ट बेस हामीलाई पूर्ण तहमा पुगेको छ र हामीले परीक्षणको अवधिभरि यसमा कुनै पनि समायोजन गर्नुपर्दैन। एक पटक आधार Z अक्षको ० स्थितिमा छ, यसले फ्लेक्सिब्याट पानालाई पूर्ण रूपमा छुनुपर्दछ, अन्यथा हामीसँग scre स्क्रू छन् जुन हामी यसलाई स्तरमा समायोजित गर्न सक्छौं।
प्रिन्टिंगको समयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्ने विवरणहरू मध्ये एउटा हो प्रिन्टर एकदम शान्त छ, हामी मात्र मुश्किल माउन्ट समावेश एक मात्र मोटर द्वारा बनाईएको आवाज सुन्न। FDM प्रिन्टरको तुलनामा के फरक छ!
हामीले पहिलो छापिएको वस्तु देख्ने बित्तिकै हामी सबै बिर्स्यौं जसले हामीलाई कष्ट दिएका छन्, प्रिन्ट गुण असाधारण छ र FDM प्रिन्टरको साथ हासिल गर्न सकिन्छ भन्दा उत्कृष्ट छ। एक दर्जन प्रिन्टर पछि हामी त्यसलाई रुजु गर्छौं धेरै उच्च राल उपज र धेरै थोरै सामग्री प्रत्येक प्रिन्टमा प्रयोग गरिन्छ.
SLA मुद्रणको विशेष सुविधाहरू
छाप रालमा यसको खास विशेषता छ माथिको बाट तल सम्म गरियो त्यसकारण, मुद्रित वस्तुको प्रत्येक पोइन्ट कुनै न कुनै तरिकामा प्रिन्टिंग आधारमा जोड्नुपर्दछ ताकि यो गुरुत्वाकर्षणको शक्ति मुनि ट्रेको तल्लोमा नपरोस्। यो विवरण अनुवाद गर्दछ प्रिन्ट मिडिया विशेष डिजाइनमा छाप्नको लागि डिजाइनमा राखिन्छन्.
कुनै पनि निर्माण प्रक्रियामा तरलको प्रयोगले सधैं कठिनाई थप गर्दछ। हाम्रो केसमा, थप रूपमा, प्रश्नमा रहेको तरल पदार्थ छाप सामग्री हो र यो क्युवेटमा सीमित क्षमतासहित समाहित हुन्छ। यसको मतलब यो छ कि छापहरूको केहि निश्चित संख्या र मुद्रित टुक्राहरूको आकारमा निर्भर गर्दै हामीले थप रालले भर्नु पर्छ। ताकि हाम्रो प्रिन्टहरू सही तरीकाले पूरा भयो त्यहाँ छापिने भोल्युम भन्दा सँधै ट्रेमा रेजिनको मात्रा धेरै हुनुपर्दछ.
किनकि LCD स्क्रिनलाई आंशिक साथ साथै पूर्ण रूपमा प्रकाश दिन समान समय र प्रयासको आवश्यक पर्दछ, हामी प्रिन्टिंग क्षेत्रमा फिट गर्न सक्ने जति धेरै वस्तु प्रिन्ट गर्न सक्दछौं आवश्यक समय वा प्राप्त गरेको गुणवत्तालाई असर नगरी.
पोस्ट इम्प्रेशन उपचार
वस्तुहरू रालमा छापिएको प्रयोगको लागि तयार छैन। ताजा मुद्रित तिनीहरूसँग अवांछनीय लचिलोपन र भंगुरता छ र तिनीहरू पूर्णतया तरल अवस्थामा रालले ढाकिएका हुन्छन्। हामीले टुक्राहरूको लागि उपचार गर्नुपर्नेछ उनीहरूलाई मनपर्दो अवस्थामा छोड्नुहोस्। भागहरू १० मिनेटमा मदिरामा भिजाउनुपर्दछ र कन्टेनर जसमा उनीहरू डुबाइन्छ घाम वा अन्य कुनै पनि यूभी स्रोतमा पर्दाफास गर्नुपर्नेछ।। यस उपचारको साथ हामी अझ राम्रा मेकानिकल गुणहरू र पूरै सफासँग भागहरू प्राप्त गर्नेछौं। केहि उत्पादकहरू जस्तै फॉर्मलाबहरूले यी पोस्ट-प्रिन्ट उपचारहरू गर्नको लागि विशिष्ट व्यावसायिक उत्पादनहरू सिर्जना गर्न शुरू गरेका छन्। घरमा हामी कुनै पनि एयरटिक कन्टेनर रक्सीले भरिएको प्रयोग गर्न सक्दछौं (ड्रगस्टोरबाट) र यदि हामी धेरै विस्तृत छौं भने हामी एउटा यूभी फ्ल्यासलाइट प्रयोग गर्न सक्छौं जुन सस्तोमा अनलाइन स्टोरहरूमा किन्न सकिन्छ।
El निर्माताको बिक्री पछि सेवा एकदम ध्यान दिएर छ र हाम्रो सबै शंकाहरू समाधान गरेको छ धैर्यतापूर्वक मेल द्वारा कागजात पठाएर। यद्यपि यसमा ध्यान दिइएन दूरी जुनबाट बिक्री गरिएको छ एक उत्तम विकलांग छ जसले प्राविधिक समर्थनलाई गाह्रो बनाउँछ। सरल मर्मतको लागि निर्मातालाई हाम्रो उपकरणहरू फर्काउने उच्च शिपिंग लागतहरूको कारण एक असम्भव कार्य भयो। न त निर्माताको वेबसाइटमा बिक्रीको लागि उपकरणहरूको लागि कुनै अतिरिक्त अंश छ, यद्यपि प्रयोग गरिएको तत्त्वहरूको कम जटिलताले हामीलाई सजिलैसँग हामीलाई चाहिने कुनै पनि तत्व प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
यी सबैको लागि यी सर्तहरूमा मेसिन प्राप्त गर्न उच्च DIY प्रवृत्ति चाहिन्छ ताकि हामी आफैंले उठेका समस्या समाधान गर्ने ख्याल राख्छौं। तिनीहरूको हिम्मत मा हेरेदेखि सही तवरले जडान गर्न सबै तारहरु लाई जडान गर्न को लागी आवश्यक भागहरु डिजाईन गर्न को लागी सही वायु प्रवाहको लागि इलेक्ट्रोनिक्स को चिसो को लागी। भाग्यवस हामी निर्माता हौं र यो हाम्रोलागि समस्या भन्दा चुनौतीको अधिक छ।
प्रमाण छ कि यो निर्माता समुदाय को सामान्य राय छ मा फेला पार्न सकिन्छ को अस्तित्व फेसबुक प्रयोगकर्ता समूह लगभग २००० सदस्यको जसमा उनीहरू एक अर्काको समस्या समाधान गर्छन् र सुधारको प्रस्ताव गर्छन्। यहाँसम्म कि निर्माताको पनि समूहमा उपस्थिति छ र प्रस्तावित सुधारहरूको अंश प्रिन्टरको सबैभन्दा भर्खरको संस्करणहरूमा समाहित गरिएको छ। समुदायको पहलमा पनि विस्तृत दस्तावेजको साथ एक विकी सिर्जना गरिएको छ जसमा हामी आफैंलाई उपकरणको अपरेशन राम्रोसँग बुझ्न, सुधार गर्न र हाम्रो शंका समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छौं।
प्रत्येक तहको छविको प्रसारण माध्यम द्वारा बाह्य उपकरणहरूबाट गरिन्छ HDMI। प्रिन्टरको नियन्त्रण (मोटर्स र बत्तीहरू)aको माध्यमबाट गरिन्छ USB पोर्ट. प्रिन्टरले स्ट्यान्डअलोन मोडमा अपरेट गर्न सक्दैन र यो सबै समयमा एक कम्प्युटरमा जडान हुनुपर्दछ जसले उनीहरूलाई प्रिन्टि instructions निर्देशनहरू प्रसारित गर्दछ।
निर्माताले विन्डोजहरूको लागि सिर्जना कार्यशाला सफ्टवेयर प्रयोग गर्न प्रस्ताव गर्दछ मुद्रण प्रक्रिया काट्न र नियन्त्रण गर्न, यो सफ्टवेयर हो जुन हामीले उत्कृष्ट परिणामहरूको साथ प्रयोग गरेका छौं। यद्यपि निर्माता समुदाय फेरि यो निर्माताको अगाडि छ र हामी एक रास्पबेरी र nanodlp छवि को उपयोग को प्रस्ताव स्वशासित क्षमताहरूको साथ प्रिन्टर प्रदान गर्न। तपाईं यसको बारे अधिक जानकारी निर्माताको वेबसाइट https://www.nanodlp.com मा पाउन सक्नुहुन्छ
यो टोली यो स्पेनमा वितरित गरिएको छैन हामी € € +० + शिपि Ali लागतको लागतमा हामी यसलाई AliExpress मा किन्न सक्छौं। मुद्रित भागहरूको गुणवत्ता र समान उपकरणहरूको लागतको तुलनामा हास्यास्पद मूल्य।
राल औसत लागतको FDM फिलामेन्ट भन्दा काफी महँगो उपभोग्य हो १ लिटर राल लगभग छ 100 €। जे होस्, प्रिन्टको प्रकारलाई ध्यानमा राख्दै जुन यस प्रकारको उपकरणहरू उद्देश्य राख्दछन् (साना वस्तुहरू विस्तार र जटिलताको उच्च स्तरको साथ), एकल खरीदले धेरै प्रभावहरू सुनिश्चित गर्दछ.
La वानाहाओ डुप्लिकेटर 3D थ्रीडी प्रिन्टर एक असाधारण टोली हो त्यसले हाम्रो आँखा थ्रीडी प्रिन्टि within भित्र नयाँ संसारमा खोल्यो। हामी सक्छौं वस्तुहरू प्रिन्ट गर्नुहोस् घरमा वा कार्यालयमाaसंग असाधारण गुणवत्ता र कम आवाज.
हामीसँग उपकरणमा अनुभव छैन जुन यस प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछ तर दिईएको छ यस टोलीको यसको प्रतिद्वन्द्वीको साथ ठूलो मूल्य अन्तर यो निर्विवाद छ कि धेरै उपभोक्ताहरु को लागी यो एक स्पष्ट विकल्प हुनेछ। यस उपकरणको प्रयोगले तपाईंलाई धेरै आनन्द दिन्छ, जबसम्म तपाईं प्रामाणिक निर्माताहरू नै समस्या खडा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन आफै उठ्न सक्छ।
के तपाइँ विशेष रूपमा यस टोली वा Wanhao बाट अरूलाई रूचि छ? के तपाइँ यसको उपयोगका लागि सही चरणहरूको साथ हामी ट्यूटोरियल बनाउन चाहानुहुन्छ? के तपाईं बिभिन्न रेजिनहरूको विश्लेषण हेर्न चाहनुहुन्छ जुन हामी यस प्रिन्टरको साथ प्रयोग गर्न सक्दछौं? हामीलाई लेखमा टिप्पणी दिनुहोस् र हामी यस उपकरण र यस निर्माताको ज्ञान पूर्ण गर्न विभिन्न सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्नेछौं।
मूल्यको लागि ठूलो मूल्य
अत्यधिक विस्तृत र जटिल प्रिन्टहरू
निर्माता समुदायबाट अपवादात्मक समर्थन
सानो डिजाइन जुन कहिँ पनि फिट हुन्छ
स्पेनमा यसको कुनै प्राविधिक सेवा वा वितरण छैन
प्रारम्भिक कागजात केही गडबडी छ
निर्माताले स्पेयर पार्ट्स बेच्दैन
यो खुला स्रोत होईन
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » वानाहाओ डुप्लिकेटर 3D थ्रीडी प्रिन्टर समीक्षा
म लामो समय देखि प्रिन्टरमा हेरीरहेको छु, तपाईलाई कस्टमहरू मार्फत जान कति खर्च लाग्यो? किनभने यसले मलाई फिर्ता बनाउँदछ ...
Shiryou लाई जवाफ दिनुहोस्
टोनी डी फ्रुटोस भन्यो
ठिक छ, यो निर्भर गर्दछ कि तपाईंले यो खरीद गर्नुभएको प्लेटफर्मले यसलाई कसरी पठाउँदछ। यदि तपाइँ घोषणा गर्नुहुन्न र उपहारको रूपमा लेबल गरिएको शिपमेन्ट गर्नुहुन्न वा कम रकम घोषणा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई नि: शुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि प्याकेज घोषणा गरिएको छ वा सीमा शुल्क अवरोधहरू तपाइँसँग एक अधिभार र ढिलाइ हुनेछ।
कर एजेन्सीले यसको वेबसाइटमा गणनाको लागि जानकारी जानकारी दिन्छ।
सीमा शुल्क लागत
Toni de Frutos लाई जवाफ दिनुहोस्
विश्लेषणको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
मसँग केहि प्रश्नहरू छन्:
के सिलिकॉन धेरै गन्ध छ? के यो प्रिन्ट हुँदै गर्दा अधिक गन्ध आउँछ?
तपाईं तह घनत्व को बारे मा कुरा तर x / y रिजोलुसन के हो?
के अत्यधिक सिलिकॉन बचत गरिएको छ र तपाइँ यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
कालो क्याप भएको, यसले तपाईंलाई बताउँछ वा तपाईंलाई कसरी थाहा छ कि कसरी सिलिकॉन प्रयोग गर्ने?
कुनै अंश प्रिन्ट गरेपछि तपाईले के गर्नु पर्छ? (मैले पढेको छु कि यो अलिकता रक्सीले सफा गरिएको छ र यो नै हो)
अभिवादन र धन्यवाद!
राल एक अलि गन्ध छ, विशेष गरी जब तपाईं पहिलो बोतल खोल्नुहुन्छ। मुद्रण गर्दा यसले केहि बढी देखाउँदछ। तर यो अप्रिय छैन।
Xy रिजोलुशनको सानो बिन्दुसँग गर्नुपर्दछ जुन तपाईं तह (भक्सेल) मा चित्रण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र स्क्रिन रिजोलुसनसँग सम्बन्धित छ। LCD स्क्रिनमा जति उच्च रिजोलुसन छ, सानो सानो थोप्लाहरू कोर्न सक्छ।
अधिक रेजिन प्रिन्टरमा नै छोड्न सकिन्छ वा ट्रे हटाएर मूल बोतल वा अर्कोमा (जुन अपारदर्शी हुन्छ) खसाल्नुहोस्।
राल स्तर आँखा द्वारा छ। धेरै थोरै राल वास्तवमै प्रत्येक प्रिन्टमा प्रयोग हुन्छ। ट्रे भर्नाले समस्या बिना नै धेरै प्रभावहरू सुनिश्चित गर्दछ।
रक्सी अझ धेरै राल सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ तर अझै टुक्रामा पनी तरल पदार्थ पनी। थप रूपमा, यसलाई १० मिनेट सूर्य वा यूभी प्रकाशको स्रोतको अघि छोड्न सिफारिस गरिन्छ। त्यो हो, तपाईं टुक्रालाई मदिराको साथ पारदर्शी जारमा राख्नुहुन्छ र यसलाई सफा गर्न यसलाई हलचल गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाईले १० मिनेट सम्म घामलाई घाममा छाड्नुहोस् ताकि टुक्रा बढी कठोर हुन्छ।
तपाईको जवाफको लागि धेरै धन्यबाद र एकदम छिटो भएको कारण, म अंग्रेजी फोरममा पनि इन्टरनेटमा जानकारी खोज्न अलि बौलाहा भएको थिएँ तर केही कुरा मलाई स्पष्ट थिएन।
हेरौं कि म यो प्रिन्टर किन्न एक प्रस्ताव मा म देख्छु कि।
यस लेखका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। यो स्पष्टै चाखलाग्दो छ। मँ केही दिनको लागि यस प्रिन्टरमा हेर्दै छु र यसको खरीदको लागि जानकारी स information्कलन गर्दैछु। म तपाईंलाई माथि उल्लिखित अपरेटिंग ट्यूटोरियल्स पूरा गर्न प्रोत्साहन दिन्छ, कसरी उत्तम हार्डवेयर / सफ्टवेयर प्रदर्शन र सबै भन्दा उपयुक्त रेजिनहरू पाउने। ती समुदायको लागि बढि उपयोगी हुनेछ जुन मलाई लाग्छ कि बढ्न गइरहेको छ।
Quim लाई जवाफ दिनुहोस्
!! तपाइँको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद !!
हामी यस टोलीको बारेमा अधिक लेख गर्ने सम्भावनालाई मूल्यवान् तुल्याउँछौं। !! ब्लगमा रहनुहोस् !!
नमस्कार, के तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यो कास्टेबल रेजिनसँग राम्रोसँग काम गर्दछ भने?
नमस्कार, महान कामका लागि बधाई हो, केवल तपाईंलाई ठूलो इज्जत माग्नुहोस्, के तपाईं एक विश्वसनीय विक्रेता वा कमसेकम एक ज्ञात सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद।
Adri लाई जवाफ दिनुहोस्
मिल्टन फरफान भन्यो
नमस्ते शुभ प्रभात, म आफूलाई यो सबै किनेको खोजको प्रिन्टरको बारेमा आफूलाई सूचित गर्दै छु र यो मलाई बढी सस्तो लाग्छ र यो राम्रो विकल्प देखिन्छ, म मूल रूपमा गहनाको कामको लागि चाहिन्छ त्यसैले मलाई परिशुद्धता र विस्तृत स्तर चाहिन्छ जुन धेरै स्वीकार्य हो, I केहि प्रश्नहरू छन् कसरी मलाई औंला भनेर जान्ने कति औंठी मैले एक लीटर रालको साथ पाउन सक्छु? के तपाईसँग स्पेनी भाषामा सफ्टवेयर छ?
मिल्टन फरफनलाई जवाफ दिनुहोस्
तिमीलाई कस्तो छ! मलाई एक शंका छ। यदि कुनै पनि समयमा म कम्प्युटरहरू परिवर्तन गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रम विस्थापित गर्दछ, के यसले नयाँ कम्प्युटरमा सफ्टवेयर पासवर्ड पुन: प्रयोग गर्न दिनेछ?
कृषि फोहोरबाट सिर्जना गरिएको थ्रीडी प्रिन्टिंगका लागि नयाँ फिलामेन्टहरू
स्विफ्ट खेल मैदानहरूले अब तपाईंलाई रोबोटहरू, ड्रोनहरू, र संगीत उपकरणहरू पनि गर्न दिन्छ